कसरी आफ्नो बच्चाहरु लाई राम्रो संग शिक्षित गर्न को लागी आमाहरु आज
कसरी आफ्नो बच्चाहरु लाई राम्रो संग शिक्षित गर्न को लागी
टोय टोरेस | 14/10/2021 20:00 | सुझावहरू
बच्चाहरु लाई राम्रो संग पढाउन को लागी एक सजिलो काम छैन, किनकि अभिभावक त्यहाँ सबैभन्दा जटिल काम हो। बारेमा एक पथ कि एक dizzying दर मा परिवर्तन हुँदैछ, यति धेरै कि कहिलेकाहीँ तपाइँ अर्को चरण मा सार्नु अघि समायोजन गर्न को लागी समय छैन। बच्चाहरु धेरै छिटो बढ्छन्, उनीहरु लगातार सिकिरहेका छन् र उनीहरु सबै अनुभव एक नयाँ सिक्ने चुनौती को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
त्यसो कि बच्चाहरु को शिक्षा राम्रो हुन, यो एक निश्चित हद सम्म सख्त हुन आवश्यक छ, तपाइँले पनि मूल्यहरु सिकाउनु पर्छ, धेरै धैर्य हुनुहोस् र धेरै माया छ। किनभने एक बुबा वा आमा हुनु मात्र बच्चाहरु लाई संसार मा ल्याउन को लागी र यदि उनीहरु परिवार को एक वा अन्य सदस्य जस्तै मिल्दछन् भनेर मात्र होईन। मानिन्छ बच्चाहरु लाई शिक्षित गर्नुहोस् ताकि उनीहरु लाई आवश्यक सीप र उपकरण छ संसारमा काम गर्न।
1 बच्चाहरुलाई राम्रो संग पढाउनुहोस्
1.1 राम्रो उदाहरण
1.2 सीमा संग
1.3 मूल्यहरु संग
1.4 उसको साथी नबन
बच्चाहरुलाई राम्रो संग पढाउनुहोस्
बच्चाहरु लाई राम्रो संग पढाउन सकिन्छ, तर यो पनि नराम्रो गर्न सकिन्छ। धेरै जसो समय यो एक पुरा तरिकाले बेहोश तरीका मा गरिन्छ, किनकि माया यी सानाहरु को लागी मायाले हामीलाई बिर्सन्छन् कि आमा बुबा शिक्षक हुनुहुन्छ। उदाहरण आफैं मा धेरै जसो मा सबै भन्दा राम्रो शिक्षा र जहाँ हामी प्रायः असफल, मा छ हामी बिर्सन्छौं कि आमा बुबा दर्पण हो जहाँ बच्चाहरु प्रतिबिम्बित हुन्छन्.
यो एक राम्रो शिक्षा को लागी आधारभूत कुञ्जीहरु को केहि हो। परे गल्तीहरु जुन हरेक आमाबाबुले गर्न सक्छन्। किनभने एक बच्चा को लागी आमा बुबा सुपरहीरो जस्तै हुन सक्छ, तर व्यवहार मा उनीहरु अझै पनी डर, शंका, समस्या र डर को एक धेरै संग एक सामान्य व्यक्ति हो।
हरेक दिन तपाइँ आफ्नो बच्चाहरु लाई एक हजार र शिक्षा को लागी एक आधारभूत कुञ्जी पढाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो सरल तरीका बाट कि तपाइँ शायद ही नोटिस गर्नुहुनेछ। जनतालाई नमस्कार भन्नुहोस्, धन्यवाद भन्नुहोस्, पसलका कर्मचारीहरुलाई मुस्कान दिनुहोस्, कार संग रोक्नुहोस् ताकि पैदल यात्रीहरु पार गर्न सक्छन्, ड्राइभ गर्दा खराब इशारा छैन। यदि तपाइँ यी रीतिरिवाजहरु प्राप्त गर्नुहुन्छ उनीहरु एक बानी बन्नेछन् र तपाइँको बच्चालाई शिक्षित गर्न को लागी तपाइँ राम्रो भावनात्मक स्वास्थ्य को आनन्द लिनुहुनेछ।
बच्चाहरु आफैंलाई चुनौती दिन को लागी उनीहरु जान सक्छन् कती टाढा जान सक्छन्, र यो को एक भाग प्रोत्साहित गर्न को लागी एक राम्रो कुरा हो। जे होस्, एक सानै उमेर बाट नियम र सीमाहरु हुनु आवश्यक छ ताकि बच्चाहरु लाई सामाजिक मानदण्डहरु संग दैनिक जीवन को विभिन्न क्षेत्रहरु मा पाइन्छ संग बाँच्न सिक्न। यसको लागि, सीमा, नियम र परिणाम आवश्यक छ।
मूल्यहरु एक व्यक्ति को परिभाषित, सहानुभूति, एकता, सम्मान, कृतज्ञता, काम को मूल्य, बच्चाहरु लाई राम्रो संग शिक्षित गर्न को लागी आवश्यक छ। मानिसहरु, जनावरहरु र बिरुवाहरु लाई मान्न को लागी तपाइँको बच्चाहरु लाई सिकाउनुहोस्हो, ग्रह को ख्याल राख्न को लागी सबै को घर हो। तपाइँको बच्चाहरु लाई लचीला हुन को लागी शिक्षित गर्नुहोस् र कुनै पनि स्थिति मा अनुकूलन गर्ने क्षमता छ।
उसको साथी नबन
यो तपाइँको बच्चाहरु संग एक भरोसा सम्बन्ध बनाउन को लागी एक कुरा हो, ताकि उनीहरु लाई कुनै पनी मुद्दाहरु को बारे मा उनीहरु लाई आफ्नो जीवन भर मा हुन सक्छ को बारे मा कुरा गर्न को लागी स्वतन्त्रता छ। यो एक अर्काको रूपमा उनीहरुको साथी बन्ने प्रयास गर्ने, एक बराबर को रूप मा व्यवहार गर्न को लागी हो, किनकि त्यहाँ सीमाहरु हुनु पर्छ कि साथीहरु संग त्यहाँ छैन। तपाइँ एक बुबा वा आमा हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी, तपाइँको बच्चालाई थाहा छ कि तपाइँ उसको संरक्षक हुनुहुन्छ, व्यक्ति जसले उसलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ र जो उसको सम्पूर्ण जीवनको हेरचाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
आफ्नो जीवन र किशोरावस्था को दौरान, तपाइँ आफ्नो बच्चा को आधारभूत मामिलाहरु, जस्तै अर्थव्यवस्था, बचत, घरको काम, उसको आफ्नै स्वास्थ्य र यौन शिक्षा को ख्याल राख्नु पर्छ। किनभने त्यो हो एक मात्र तरीका सुनिश्चित गर्न को लागी तपाइँका बच्चाहरु राम्रो संग तैयार छन् संसारको सामना गर्न। किनकि, एक महान शैक्षिक शिक्षा केहि छैन यदि यो एक महान भावनात्मक शिक्षा संग छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: आज आमाहरू » परिवार » सुझावहरू » कसरी आफ्नो बच्चाहरु लाई राम्रो संग शिक्षित गर्न को लागी
महिनावारी भन्दा पहिले दुखाई वा गर्भावस्था?
मेरी छोरी किन धेरै रुन्छिन्?